Nosamborin’ny Manampahefana Emira Arabo Mitambatra Ny Mpikatroka Mpiaro Ny Zon’Olombelona Iray Ary Nohalavaina Ny Fihazonana Ny Hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Marsa 2017 5:25 GMT
Tamin'ny taona 2011, nogadraina i Ahmed Mansoor noho ny faniratsirana ny mpitondra Emirà Arabo Mitambatra . Sary: Orina Mpanasoa Martin Ennals, tao amin'ny Citizen Lab.
Notànan'ny manampahefana Emira Arabo Mitambatra (UAE) ilay mpiaro ny zon'olombelona malaza Ahmed Mansoor, ary nohalavaina ny fitazonana ilay mpikatroka Osama al-Najjar na dia efa nahavita ny saziny aza izy .
Mpitandro ny filaminana miisa roa ambin'ny folo no nanafika sy nikaroka ny tranon'i Mansoor vao maraina be tamin'ny 20 Martsa. Notànan'izy ireo i Mansoor sady tsy nilaza tamin'ny vadiny izy ireo fa nalaina izy, araka ny Amnesty International. Tsy mbola fantatra ny toerana misy an'i Mansoor ary miahiahy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa mety hiharan'ny fampijaliana izy mandritra ny fitazomana azy .
Araka ny sampandraharaham-baovao-panjakana WAM, voampanga i Mansoor ho mampiasa ny media sosialy tamin'ny “famoahana vaovao tsy marina sy tsaho sy ny fampiroboroboana fikasana mandrisika fankahalana sy mampisaratsaraka ara-pivavahana.”
Mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona mazoto sy mpisera mavitrika tao amin'ny media sosialy manana mpanjohy Twitter mihoatra ny 17.000 i Mansoor. Izy no nahazo ny lokan'ny Orina Mpanasoa Martin Ennals tamin'ny taona 2015, izay manohana ireo mpiaro ny zon'olombelona tandindonin-doza.
Tamin'ny taona 2011, nampidirina am-ponja izy niaraka tamin'ny mpikatroka miisa efatra hafa noho ny fifandraisany tamin'ny UAEHewar.net, izay fifanakalozan-kevitra an-tserasera tantanan'i Mansoor. Nampiasa ilay sehatra fifanakalozan-kevitra i Mansoor mba hamoahana ny fanangonan-tsonia hitakiana ny fanovana demaokratika ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Voampanga ho nanompa ny mpitondran'i Emira Arabo Mitambatra izy ary nahazo sazy an-tranomaizina telo taona, kanefa navotsotra noho ny famindram-pon'ny mpitondra rehefa avy nanefa sazy telo taona an-tranomaizina. “Iray amin'ireo feo vitsy ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) izay manome tamberin-dresaka mahaleotena sy azo itokisana momba fivoaran-draharahan'ny zon'olombelona ao amin'ny firenena” i Mansoor, hoy ny Orina Mpanasoa Martin Ennals raha nilaza ny mombamomba ilay mpikatroka.
Tao amin'ny Twitter, namoaka tsy tapaka lahatsoratra momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, izay tena fitondram-panjaka tsirefesi-mandidy, izy. Vao andro vitsivitsy talohan'ny nisamborana azy, nisioka ny ahiahiny momba ny fitazonana mitohy sy tsy ara-drariny an'i Osama al-Najjar izy, izay tsy navoaka na dia efa nahavita ny saziny telo taona tany am-ponja aza.
Afaho i Osama al-Najjar. Efa tapitra ny saziny an-tranomaizina, kanefa tsy navotsotry ny manampahefana tao Emirà izy, mety ho tetika hamelezana ireo voafonja noho ny fanehoan-kevitra any aoriana ity dingana mampidi-doza sy tsy mbola fahita hatrizay ity .
Mbola notànana i Osama Al-Najjar, na dia efa nahavita ny saziny aza. Sary tao amin'ny kaonty Twitter-n'ny mpikatroka.
Nosamborina telo taona lasa izay i Al-Najjar noho ny famoahana sioka maneho ny ahiahiny fa nampijaliana tany am-ponja ny rainy, ary niantso ho famotsorana azy sy ho an'ireo gadran'ny fanehoan-kevitra hafa ao amin'ny Emirà izy. Any am-ponja nanomboka tamin'ny volana Martsa 2014 izy noho ny fanehoany hevitra manokana tao amin'ny aterineto, mbola ao anatin'ny voalazan'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona ho fihazonana tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny.
Ny rain'i Osama, Hussain Al-Najjar dia iray amin'ireo mpikatroka miisa 94 notsaraina faobe tamin'ny taona 2013 noho ny fitakiana ny fanavaozana ara-politika ao Emirà ary voampanga tamin'ny “fanimbana ny Fiarovam-pirenena”. Manefa sazy 11 taona an-tranomaizina izy amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny volana Novambra 2014, nanome sazy telo taona an-tranomaizina an'i Osama ny Efitra Fiarovam-Panjakana tao amin'ny Fitsarana Faratampony Federaly izay didim-pitsarana tsy azo anaovana fampakaran-draharaha, noho ny fiampangana maro tsy mazava sy henjana ka anisan'izany ny “fikotrehana fankahalana” manohitra ny fanjakana sy ny “fanaovana planina sy fitantanana tranonkala [miaraka amin'ny] hevitra sy vaovao manesoeso sy manala-baraka “. Taorian'ny fisamborana azy, notànana tsy nahazoam-baovao ilay mpikatroka nandritra ny efatra andro, ary nampijaliana izy nandritra izany fotoana izany. Tsy navela naka mpisolovava izy nandritra ny enim-bolana nisamborana azy
Mbola any am-ponja i Osama na dia efa nahavita ny saziny aza izy nanomboka tamin'ny 17 Martsa 2017. Araka ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao amin'ny Helodrano, nanitatra ny fanagadrana azy ny Efitra Fiarovam-Panjakana tao amin'ny Fitsarana Faratampony Federaly noho ny fangatahan'ny Mpampanoa Lalàna noho ny antony fa “miteraka fandrahonana” ny famotsorana ilay mpikatroka. Tsy namaritra ny faharetan'ny fotoana hitazonana azy ny fitsarana na izany aza.
Mampiasa tetika famoretana maro ny manampahefana Emira Arabo Mitambatra ao anatin'ny famoretana mitohy izay atao amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy mpikatroka ara-politika, anisan'izany ny fitazomana am-ponja tsy ara-drariny sy tsy ahazoam-baovao, ny fampanjavonana ankaterena, ny fampijaliana, ny fitsarana tsy ara-drariny , ny fanaovana sesitany, ary ny fanafoanana ny zom-pirenena.